My Mighty Princess ( 2008 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel January 12, 2017
ယခုအခါ တစ်ခါတင်ဆက်မယ့် My Mighty Princess ကားလေးကတော့ 2008 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Comedy , Drama , Action movie လေးပါ ...
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ - သိုင်းလောကမှာ အဖိုးတန်လှတဲ့ ကြမ္မာစိမ်းဓားကို လူတစ်ယောက်က ခိုးယူသွားခဲ့ပါတယ် ... သိုင်းလောကအကြီးအကဲတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ချားရော့သိုင်းပညာရှင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူ Kang So-hwi ဟာ ချားရော့ကလပ်မှာ ခွန်အားအကြီးဆုံးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ... ထက်မြက်သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ် ... သူဟာစီနီယာဖြစ်သူ ဟော်ကီကစားသမား Jun-mo ကို သဘောကျပြီးနောက်မှာ သာမန်မိန်းကလေးအဖြစ်သာ နေထိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ချားရော့ကလပ်ကနေ ထွက်ခဲ့ပါတယ် ... စီနီယာ Jun-mo နောက် တစ်ကောက်ကောက်လိုက်ရင်း Jun-mo မှာလည်း crush ရှိတာကို သိခဲ့ပေမယ့် အားမလျှော့ပဲ ဟော်ကီအသင်းထဲဝင်ခဲ့ပါတယ် .... သမီးဖြစ်သူကို ဇနီးသိုင်းပညာအမွေလက်ဆင့်ကမ်းဖို့ မဖြစ်နိုိင်တော့တဲ့ အခြေအနေနဲ့ ကြမ္မာစိမ်းဓားကို ပြန်လည်အပ်နှံဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ So-hwi အဖေဟာ သေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ သိုင်းပညာကို တိတ်တဆိတ်လေ့လာသင်ယူခဲ့တယ် .... တစ်ဖက်မှာလည်း So-hwi ရဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း ဆိုင်ကယ်ရူး lloung ကို မက်လုံးပေးပြီး So-hwi သိုင်းပညာပြန်လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့အရေး အကူအညီတောင်းခဲ့တယ် ... lloung ကလည်း ငယ်ငယ်လေးတည်းက ချစ်လာရတဲ့ သူငယ်ချင်းမလေးကို သိုင်းလောကထဲပြန်ဝင်ဖို့ အပြင်းအထန်ကြိုးစားပေးပါတယ် ( ဆိုင်ကယ်လိုချင်တာလည်းပါမှာပေါ့ xD)
နောက်ဆုံးမှာ သူမ crushနေတဲ့ စီနီယာကပြန်ကြိုက်မလား ?
သူမသူငယ်ချင်းကိုပဲ သံယောဇဉ်ပိုသွားမလား ?
ကြမ္မာစိမ်းဓားကိုရော ပြန်လည်အပ်နှံနိုင်မှာလား ?
ဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်အားပေးကြပါဦးရှင် comedy ကားလေးဖြစ်တာမို့ တစ်ကားလုံး ပြုံးစိစိနဲ့ ကြည့်သွားရမှာပါ ... မြေခွေးမလေးကိုယ့်ချစ်သူ ကားထဲက မင်းသမီးလေး Shin Min Ah ကို main actress အဖြစ်နဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
Translator - KLP
Quality - 360p
Myanmar Asian TV Channel မှ တင်ဆက်သည် ။ ။
Download on V.I.P Link ( 624 MB )
Download on pcloud Link ( 624 MB )
Action Comedy Drama Korea
Labels: Action Comedy Drama Korea
sangaJanuary 13, 2017 at 1:24 AM
ကို Final episode ထိသင်ပေးပါ